पाठलाई तालिका वरिपरि बेर्नका लागि, तालिकालाई फ्रेममा राख्नुहोस्, रफ्रेम वरिपरि पाठ बेर्नुहोस्.
पाठ बेर्ने विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.
पाठलाई मात्र वस्तुको रूपरेखा वरिपरि बेर्नुहोस्, तर वस्तु आकार बीचको खुला क्षेत्रहरूमा होइन. यो विकल्प फ्रेमहरूका लागि उपलब्ध हुँदैन.
चयन वस्तु र पाठ बीचमा खाली स्थानको मात्रा छोड्न निश्चित गर्नुहोस्.
खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं वस्तुको बायाँ कुना र पाठ बीचमा चाहनुहुन्छ.
खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं वस्तुको बायाँ कुना र पाठ बीचमा चहनुहुन्छ.
खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईँं वस्तुको माथि कुना र पाठ बीचमा चाहनुहुन्छ.
वस्यतुको तलको कुना र पाठ बीचमा चाहनु भएको खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्.
Title is: बेर्नुहोस्